५ नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ की बुटवल ? सुरु भो वाम गठबन्धनमा किचलो | Hulaki Online
२०७४ पुष ७, शुक्रबार ०९:४२
2021 Jan 19, Tuesday 11:43
५ नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ की बुटवल ? सुरु भो वाम गठबन्धनमा किचलो
प्रदेश ५ को राजधानीलाई लिएर वाम गठबन्धनका नेताहरु दुई खेमामा विभाजित देखिएका छन् । यो प्रदेशमा गठबन्धनको दुई तिहाई पुग्ने देखिन्छ र एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री पक्काजस्तै छ । तर, प्रदेशको राजधानी दाङलाई बनाउने कि बुटवल भन्ने बहसमा वाम गठबन्धनका नेताहरु दुई धारमा देखिएका छन् ।
बटौली आन्दोलनका अगुवाहरु अहिले पनि बुटवललाई राजधानी बनाउनुपर्ने मत राख्छन् । यसमा एमालेका अर्का उपमहासचिव घनश्याम भुसाल पनि थपिएका छन्, जो रुपन्देही ३ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका छन् । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड पनि बुटवललाई नै राजधानी बनाउनुपर्ने मत राख्छन् । तर, उनीहरु सबै (खाँडबाहेक) प्रदेशसभामा नभई प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएका छन् ।
यो विवादमा एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले भने आफ्नो मौनता तोडेका छैनन् । उनी बर्दियाबाट चुनाव लडेका थिए तर, कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित भए । पुस-७, २०७४
हुलाकीअनल़ाइन - २०७४ पुष ७, शुक्रबार ०९:४२